Karin_ Berbera, 11 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Laba gabdhood oo uu dhalay boqor Cabdallaha Sucuudiga ayaa ka codsaday caalamka in loo soo gurmado, lagana saaro jeelka ay ku xidhan yihiin. Gabdhahan oo la kala yiraahdo Sahra oo 42 jir ah iyo Jawaahir oo 38 jir ah ayay u suura gashay inay email iyo telefoon kula xiriiraan wargeyska Sunday Times.
Gabdhahan ayaa si murugo badan uga waramaya nolosha ay ku jiraan. Waxay sheegeen inay 13 sanadood ku jiraan qasriga boqortooyada ee magaalada Jidda. Gabdhahan hooyadood oo la yiraahdo Cunuud Al Faayis ayaa wiigii hore waraaq u qortay hay'adaha xuquuda bani aadmiga iyadoo ka codsanaysa in gabdhaheeda xoriyadooda la siiyo, qolalka ay ku xidhan yihiina laga soo daayo.
Gabdhahan walaalaha ahi waxay kaloo wargeyska u sheegeen inay laba gabdhood oo kale oo ay hooyadood dhashay oo 39 iyo 41 jir ah lagu hayo qasri kale oo magaalada jidda ku yaala. Kama baxno guriga nalooma ogola inaan si xor ah wax u qabsano, waxaa aabahay nagu balamiyey wiilal uu dhalay oo aan shaqa kale qaban inay na ilaaliyaan mooyee ayay tiri Sahra oo u qaadan weyday inay wargeys debedeed u waramayso. Shaqo ayaan bangiga helay ka dib aabahay ayaa ogaaday wuxuuna ciqaabay qofkii ii soo helay, sidaa waxa tiri Jawaahir oo sheegtay in sida ay ku nool yihiin geeridu dhaanto.
Hooyada gabdhahan dhashay ayaa sheegtay in Cabdalla loo guuriyey iyadoo 15 jir ah, isla markaana ay afar gabdhood oo is xiga u dhashay, markaas ayuu i furey dibna uma arkin mana guursan ayay tiri hooyada gabdhahan dhashay.
Labadan gabdhood ayaa tilmaamay inay tahay markii u horeysay ee ay u suura gasho inay warkooda dunida gaadhsiiyaan, noloshayadii jeel ayaan ku qaadanay iskaba daa inaan guursano oo reero samaysanee, waan ka qoomamoonaynaa inaan reer boqor ka dhalanay ayay ku cawdeen ilma boqor Cabdalle.
Wiilasha reer boqor ayaa caan ku ah inay u temeshle tagaan meeshay doonaan, halka gabdhaha reer boqor iyo gabdhaha kalee Sucuudiga aan loo ogoleyn inay si xor ah u soo qabsadaan danahooda. Arintan gabdhuhu sheegeen ayaan la ogeyn waxa ay kaga jawaabi doonaan boqortooyada Sucuudigu..